Bit By Bit - Unxulumano - 6.8 Isiphelo
Uphando lwezeNtlalo kwixesha ledijithali luphakamisa imiba emitsha yokuziphatha. Kodwa le micimbi ayinakunqunywa. Ukuba thina, njengomphakathi, sinokuhlakulela imigaqo nemigangatho ekwabelwana ngayo ekwaxhaswa ngabaphengululi kunye noluntu, ngoko ke sinokubamba ubuchule bexesha ledijithali ngeendlela ezinoxanduva kunye noluncedo kuluntu. Esi sahluko sichazela umzamo wam ukusishukumisela kulolu hlobo, kwaye ndicinga ukuba okuphambili kuyakuba ngabaphandi ukuba bafumane ukucinga ngokusekelwe kwimigaqo, ngelixa beqhubeka belandela imithetho efanelekileyo.
Kwicandelo 6.2, ndachaza iiprojekthi ezintathu zophando lweedigrari eziye zavelisa ingxabano yokuziphatha. Emva koko, kwicandelo 6.3 Ndachaza oko ndicinga ukuba yisona sizathu esibalulekileyo sokungaqiniseki ngokwemigaqo yobugcisa bezentlalo: ukunyuka ngokukhawuleza ngamandla kubaphandi ukugcina nokuzama abantu ngaphandle kwemvume okanye ukuqonda. Ezi zakhono zitshintsha ngokukhawuleza kunemigangatho yethu, imithetho kunye nemithetho. Ngokulandelayo, kwicandelo 6.4, ndichaze imigaqo emine ekhoyo ekhokelela ekucingeni kwakho: Ukuhlonipha abantu, ukuxhamla, ubulungisa, kunye nokuhlonipha uMthetho noMdla woluntu. Emva koko, kwicandelo 6.5, ndagqithisela izikhokelo ezibini zokuziphatha-ukulandelelanisa kunye ne-deontology-enokukunceda ngenye yeengxaki ezinzima ukuba ungabhekana nazo: nini na ukuba kufanelekile ukuba uthathe iindlela ezingathandabuzekiyo ukuze ufezekise ngokufanelekileyo isiphelo. Le migaqo kunye nezikhokelo zomgaqo-nkqubo ziya kukunika ithuba lokuhamba ngaphaya kokugxila kwizinto ezivunyelwe yimimiselo ekhoyo kwaye ukwandise amandla akho okuxubusha iingcinga zakho nabanye abaphandi kunye noluntu.
Ngaloo mvelaphi, kwicandelo 6.6, ndaxoxa ngeengingqi ezine ezinzima kakhulu kubaphandi benzululwazi-zentlalo: imvume yemvume (icandelo 6.6.1), ukuqonda nokulawula ingozi yolwazi (icandelo 6.6.2), ubumfihlo (icandelo 6.6.3 ), kunye nokwenza izigqibo ezinobulungisa ekujonganeni nokungaqiniseki (icandelo 6.6.4). Ekugqibeleni, kwicandelo 6.7, ndagqiba ngeengcebiso ezintathu zokusebenza kwindawo enokuziphatha okungaxhaswanga.
Ngokwalo imihlaba, esi sahluko bajolise ngokwembono omnye umphengululi ngamnye ekufuneni ulwazi generalizable. Ngenxa yoko, amagqabi imibuzo ebalulekileyo ukuphuculwa kwenkqubo yokongamela yemikhwa zophando; imibuzo malunga nokulawulwa ukuqokelelwa nokusetyenziswa kwedatha iinkampani; na imibuzo malunga yokucupha nobunzima ngoorhulumente. Le mibuzo neminye zintsonkothile ngokucacileyo kwaye kunzima, kodwa ke ithemba lam, ukuba ezinye izimvo ezivela yokuziphatha kuphando kuya kuba luncedo kwezinye ezi kwiimeko.